Ememe ncheta - www.yomelijah.com
"N’ihi na, n’ezie, a chụwo nwa atụrụ ememme ngabiga anyị n’àjà, ya bụ, Kraịst"
(1 Ndi Korint 5:7)
Biko pịa na njikọta iji hụ nchịkọta isiokwu ahụ
Bọchị ncheta ọnwụ Jizọs Kraịst ọzọ ga-abụ Tuzdee Eprel 12, 2022, mgbe anyanwụ dasịrị
Kedu otu esi agbakọ ụbọchị a?
Nwere ike ịlele nkọwa zuru oke n'okpuru asụsụ dị n'okpuru:
- Ememe Ngabiga bụ ihe atụ nke ihe Chineke chọrọ maka ememe ncheta nke ọnwụ Kraịst: "n’ihi na ihe ndị ahụ bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, ma ihe bụ́ ezie dịịrị Kraịst" (Ndị Kọlọsị 2:17). "N’ihi na ebe Iwu ahụ nwere onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa, ma ọ bụghị ihe ndị ahụ kpọmkwem" (Ndị Hibru 10:1).
- Naanị ndị e biri úgwù nwere ike ịme Ememe Ngabiga: "N’ọnwa nke mbụ, n’ụbọchị nke iri na anọ n’ọnwa, ná mgbede ka unu ga-eri achịcha na-ekoghị eko ruo ná mgbede ụbọchị nke iri abụọ na otu n’ọnwa ahụ" (Ọpụpụ 12:48).
- Ndị Kraịst ha anaghị eme nke ibi úgwù nke anụ ahụ. Ugbu a ọ bụ "úgwù ime mmụọ": "Biekwanụ obi unu úgwù, unu ekwesikwala olu ike ọzọ" (Deuterọnọmi 10:16, Ọrụ 15:19,20,28,29 "Iwu nke ndi-ozi," Ndi Rom 10:4 "njedebe nke Iwu" (enyere Mosis)).
- "úgwù ime mmụọ" nke obi bu nrube isi nye Chineke na nwa ya Jisos Kraist: "N’eziokwu, ibi úgwù bara uru naanị ma ọ bụrụ na ị na-edebe iwu; ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-emebi iwu, úgwù e biri gị aghọwo ebighị úgwù. Ya mere, ọ bụrụ na onye a na-ebighị úgwù na-eme ihe ziri ezi ndị dị n’Iwu ahụ, ọ̀ bụ na a gaghị agụ ebighị úgwù ya dị ka ibi úgwù? Onye bụkwa onye a na-ebighị úgwù site n’ọmụmụ, site n’idebe Iwu ahụ, ga-ekpe gị ikpe, gị onye na-emebi iwu n’agbanyeghị na i nwere iwu e dere ede, bụrụkwa onye e biri úgwù. N’ihi na ọ bụghị onye bụ́ onye Juu n’elu ahụ́ bụ onye Juu, ọ bụghịkwa úgwù e biri n’elu ahụ́ bụ ibi úgwù. Kama, ọ bụ onye bụ́ onye Juu n’obi bụ onye Juu, úgwù e biri ya bụkwa n’obi site na mmụọ, ọ bụghị site n’iwu e dere ede. Otuto onye ahụ na-abịa, ọ bụghị site n’aka mmadụ, kama site n’aka Chineke" (Ndi Rom 2:25-29) (Les enseignements bibliques).
- Ebibeghị ya úgwù ime mmụọ, obu nnupu isi nye Chineke na Okpara ya Jisos Kraist : “Ndị na-ekwesi olu ike na ndị a na-ebighị úgwù n’obi na ná ntị, unu na-eguzogide mmụọ nsọ mgbe niile; dị ka nna nna unu hà mere, otú ahụ ka unu na-eme. Ònye n’ime ndị amụma ka nna nna unu hà na-akpagbughị? Ee, ha gburu ndị mara ọkwa tupu oge eruo banyere ọbịbịa nke Onye ezi omume ahụ, bụ́ onye unu ghọworo ugbu a ndị raara ya nye na ndị gburu ya. Unu Ndị natara Iwu ahụ dị ka ndị mmụọ ozi si nye ya ma unu edebeghị ya” (Olu 7:51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).
- "úgwù ime mmụọ" nke obi ka achiri maka itinye aka n'ememe ncheta nke onwu nke Kraist (olile anya ndi Kristain obula (eluigwe ma ọ bụ n'ụwa): "Ka mmadụ buru ụzọ nwapụta onwe ya mgbe o nyochasịrị onwe ya, mgbe o mere otú ahụ, ya taa achịcha ahụ ma ṅụọ iko ahụ" (1 Ndị Kọrịnt 11:28).
- Onye Kristian aghagh ile uche anya tupu ya etinye aka n'ememe ncheta nke onwu Kraist. Ọ bụrụ na ọ na-eche na o nwere akọnuche dị ọcha n'ihu Chineke, na o nwere úgwù ime mmụọ, mgbe ahụ, o nwere ike itinye aka n'ememe ncheta ọnwụ nke Kraịst (olileanya ọ bụla nke ndị Kraịst (eluigwe ma ọ bụ n'ụwa) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).
- Iwu doro anya nke Kraịst, iri nri nke "anu aru" ya na "ọbara" ya, bụ òkù nye Ndị Kraịst niile kwesịrị ntụkwasị obi (akara): "Abụ m achịcha na-enye ndụ. Nna nna unu hà riri mana n’ala ịkpa ma mechaa nwụọ. Nke a bụ achịcha ahụ nke si n’eluigwe bịa, ka onye ọ bụla wee rie ya ma ghara ịnwụ. Abụ m achịcha na-enye ndụ nke si n’eluigwe bịa; ọ bụrụ na onye ọ bụla erie achịcha a, ọ ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi; n’eziokwu, achịcha ahụ m ga-enye bụ anụ ahụ́ m+ n’ihi ndụ nke ụwa.” Ya mere, ndị Juu malitere ịrụrịta ụka n’etiti onwe ha, sị: “Olee otú nwoke a ga-esi enye anyị anụ ahụ́ ya ka anyị rie?” N’ihi ya, Jizọs sịrị ha: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ́ Nwa nke mmadụ, ṅụọkwa ọbara ya, unu enweghị ndụ n’ime onwe unu. Onye na-eri anụ ahụ́ m ma na-aṅụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, m ga-akpọlitekwa ya n’ọnwụ n’ụbọchị ikpeazụ; n’ihi na anụ ahụ́ m bụ ezi nri, ọbara m bụkwa ezi ihe ọṅụṅụ. Mụ na onye na-eri anụ ahụ́ m ma na-aṅụ ọbara m dị n’otu, ya onwe ya na mụ onwe m dịkwa n’otu. Dị nnọọ ka Nna m nke dị ndụ zitere m, m wee dị ndụ n’ihi Nna m, onye na-erikwa m, ọbụna onye ahụ ga-adị ndụ n’ihi m. Nke a bụ achịcha nke si n’eluigwe bịa. Ọ dịghị ka mgbe nna nna unu hà riri achịcha ma mechaa nwụọ. Onye na-eri achịcha a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi" (Jon 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).
- Ya mere, Ndị Kraịst niile kwesịrị ntụkwasị obi, ihe ọ bụla ha nwere olileanya, n'eluigwe ma ọ bụ nke ụwa, ga-ewere achịcha na mmanya site na ncheta ọnwụ Kraịst, ọ bụ iwu: "N’ihi ya, Jizọs sịrị ha: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ́ Nwa nke mmadụ, ṅụọkwa ọbara ya, unu enweghị ndụ n’ime onwe unu. (...) Dị nnọọ ka Nna m nke dị ndụ+ zitere m, m wee dị ndụ n’ihi Nna m, onye na-erikwa m, ọbụna onye ahụ ga-adị ndụ n’ihi m" (Jọn 6: 53,57).
- Ncheta ọnwụ nke Kraist ga-eme nanị n'etiti ndị na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi: "N’ihi ya, ụmụnna m, mgbe unu bịakọtara iri ya, cherenụ ibe unu" (1 Ndị Kọrint 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).
- Ọ bụrụ na ịchọrọ isonye na "ncheta ọnwụ Kraịst" ma bụrụ ndị Kraịst, a ghaghị ime gị baptizim, jiri ezi obi na-achọ irubere iwu Kraịst isi: "Ya mere, gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m. Na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma, lee! m nọnyeere unu ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ usoro ihe a" (Matiu 28:19, 20) (Baptême).
Kedu otu esi eme ememe ncheta ọnwụ Jizọs Kraịst?
"Nọgidenụ na-eme nke a iji na-echeta m"
Mgbe ememe ngabiga, Jesus Christ ike nlereanya nke ga-eme n'ọdịnihu ememe nke ncheta nke ọnwụ ya (Luke 22: 12-18). Ha dị na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a, akwụkwọ ozi:
Matiu 26: 17-35.
Mak 14: 12-31.
Luke 22: 7-38.
Jọn isi 13 ruo 17.
Jis] s nyere ihe banyere ŽdŽ umeala n'obi, saa ukwu nke ndŽ náeso z] Ya (J] n 13: 4-20). O sina dị, anyị adịghị ga-atụle ihe omume a dị ka a na ememe na-eme n'ihu na ncheta (tụnyere John 13:10 na Matthieu 15: 1-11). Otú ọ dị, akụkọ ahụ na-agwa anyị na mgbe nke ahụ gasịrị, Jizọs Kraịst "yikwasịrị uwe elu ya". Ya mere anyi aghagh i eji uwe ejiji (Jon 13: 10a, 12 tụnyere Matiu 22: 11-13). Akụkọ nke John 19:23,24: "Mgbe ndị agha ahụ kpọgidere Jizọs n’osisi, ha chịịrị uwe elu ya, kee ya ụzọ anọ, otu ụzọ maka otu onye agha, chịrịkwa uwe ime ya. Ma uwe ime ahụ enweghị ebe a dụkọtara ya, n’ihi na a kpara ya akpa site n’elu gbadaa. Ya mere, ha gwarịtara ibe ha, sị: “Ka anyị ghara ịdọwa ya adọwa, kama ka anyị kpebie site n’ife nza onye ọ ga-abụ nke ya.” Nke a bụ ka e wee mezuo ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ, nke sịrị: “Ha kere uwe elu m n’etiti onwe ha, ha fekwara nza maka uwe m.” Otú a kwa ka ndị agha ahụ mere ihe ndị a n’ezie". Jizọs Kraịst yikwasị uwe elu, dịka mkpa nke ememe ahụ. Enweghị mwube edebeghi iwu na Bible, anyị ga-eji ezi uche na okwu nke uwe (Ndị Hibru 5:14).
Judas Iskarịọt hapụrụ tupu ememe ahụ. Nke a na-egosi na ememe a ga-eme ememe naanị n'etiti Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi (Matthew 26: 20-25; Mark 14: 17-21; Jọn 13: 21-30; 1 Kọrint 11: 28,33)).
The ememe ncheta a kọwara na oké mfe: "Mgbe ha nọ na-eri ihe, Jizọs weere otu ogbe achịcha. Mgbe ọ gọzichara ya, ọ nyawara ya, nye ya ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Naranụ, taa. Nke a pụtara ahụ́ m.” O bukwaara iko. Mgbe o kelesịrị Chineke, o bunyekwara ha ya, sị: “Ṅụọnụ, unu niile; n’ihi na nke a pụtara ‘ọbara m nke ọgbụgba ndụ ahụ,’ nke a ga-awụpụ n’ihi ọtụtụ mmadụ maka mgbaghara mmehie. Ma ana m asị unu, Malite ugbu a gaa n’ihu, agaghị m aṅụ mmanya a si ná mkpụrụ vaịn ma ọlị ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-aṅụ ya nke ọhụrụ n’alaeze Nna m.” N’ikpeazụ, mgbe ha bụsịrị abụ otuto, ha pụrụ gaa n’Ugwu Oliv" (Matiu 26: 26-30). Christ kọwara ihe mere ememe a, ya pụtara àjà, nke na-anọchi anya achicha ekoghi-eko, na ihe nnọchianya nke aru ya enweghị mmehie ahụ na cup, a nnọchianya nke ọbara ya. Ọ jụrụ-eso ụzọ ya na-echeta ọnwụ ya kwa afọ na 14 Nisan (ọnwa nke kalenda ndị Juu) (Luke 22: 19).
The Gospel of John na-agwa anyị nke ozizi Kraịst mgbe ememe, eleghị anya, si John 1:31 elekere ka John 16:30. Jizọs kpere ekpere ka Nna ya, na Jọn isi 17. Matiu 26:30, na-agwa anyị, sị: "N’ikpeazụ, mgbe ha bụsịrị abụ otuto, ha pụrụ gaa n’Ugwu Oliv". Abụ otuto bụ mgbe ekpere Jizọs Kraịst gasịrị.
Anyị aghaghị ịgbaso ihe nlereanya Kraịst. Ọ bụ otu onye, ​​onye pastọ, onye ụkọchukwu nke ọgbakọ Ndị Kraịst ga-ahazi ememe a. Ememe ahụna a na-eme ememe ahụ n'ezinụlọ, ọ bụ isi ezinụlọ Ndị Kraịst ga-eme ya. Enweghị nwoke, nwanyị nke Christian bụ onye ga-ahazi ememe a kwesịrị ịhọrọ site n'aka ndị agadi nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi (Taịtọs 2: 3). N'okwu a, nwanyị ga-ekpuchi isi ya (1 Ndị Kọrịnt 11: 2-6).
Onye ọ bụla na-ahazi ememme a ga-ekpebi ịkụziri ihe na ọnọdụ a dabere na "akụkọ nke Oziọma ndị ahụ", ma eleghị anya site n'ịgụ ya site na ịza ajụjụ banyere ha. Ekpere nye Jehova Chineke ga-eme. E nwere ike ito Jehova Chineke na ịsọpụrụ Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst jiri abụ.
Achịcha ahụ ga-abụ ihe na-ekoghị eko (Olee otú iji kwadebe achicha ekoghi-eko (video)). Maka mmanya, na mba ụfọdụ ọ pụrụ isi ike ịnweta otu. N'okwu a, ọ bụ ndị ndú ga-ekpebi otú e si eji dochie anya ya n'ụzọ kachasị ekwesị dabara na Bible (Jọn 19:34). Jizọs Kraịst kwuru na ụfọdụ ahụkebe ọnọdụ, ahụkebe mkpebi nwere ike nakwa na ebere Chineke ga-etinyere n'oge a (Matiu 12: 1-8).
Enweghị ozi Akwụkwọ Nsọ "oge" nke ememe ahụ. Ya mere, ọ bụ onye ga-ahazi ihe omume a nke ga-egosi ezi uche. The naanị mkpa Bible kwuru banyere usoro iheomume nke ememe bụ ndị na-esonụ: na ebe nchekwa nke ọnwụ Jizọs Kraịst ga-eme ememe "n'etiti ha abụọ abalị": Mgbe anyanwụ dara nke 13/14 "Nisan", tupu ọwụwa anyanwụ. Jọn 13:30 na-agwa anyị na mgbe Judas Iskarịọt hapụrụ, tupu ememe ahụ, "Ọ bụkwa n’abalị" (Ọpụpụ 12: 6).
Jehova Chineke doziri iwu ememe ngabiga ahụ: "Anụ àjà ememme ngabiga ekwesịghịkwa ịdị chi abọọ"(Ọpụpụ 34:25). N'ihi gịnị? Ọnwụ nke nwa atụrụ Ememe Ngabiga ga-eme "n'etiti mgbede abụọ". Nke ọnwụ Kraịst, Nwa-aturu Chineke, e kwuru "a ikpe" nwekwara "n'etiti mgbede abụọ", tupu ọwụwa anyanwụ, "tupu oké ọkpa kwara ákwá": "Mgbe ahụ, nnukwu onye nchụàjà ahụ dọwara uwe elu ya, sị: “O kwuluwo Chineke! Ọ̀ ka dị anyị mkpa ịchọ ndị akaebe? Lee! Ugbu a, unu anụwo nkwulu ahụ. 66 Gịnị bụ uche unu?” Ha zara, sị: “O kwesịrị ọnwụ.” (...) Ozugbo ahụ, oké ọkpa kwara. Pita wee cheta ihe Jizọs kwuru, ya bụ: “Tupu oké ọkpa akwaa, ị ga-agọnahụ m ugboro atọ.” O wee pụọ n’èzí, kwaa ákwá nke ukwuu" (Matiu 26:65-75; Abụ Ọma 94:20 "Mgbe o ji iwu na-akpa nkata nsogbu", Jọn 1: 29-36, Ndị Kọlọsi 2:17, Ndị Hibru 10: 1). Chineke na-agọzi Ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi nke ụwa dum site n'aka Ọkpara Ya Jizọs Kraịst, Amen.